यसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्छ कि बस्दैन् ? [हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा] – Charchit Entertainment
काठमाडौं । मानिसहरुको जीवनमा जब सन्तुष्टि मिल्छ त्यहाँ आन्नद मिल्छ । यस दौडमा मानिसहरु हर सम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै मध्यको एक शाररीक सुख पनि रहेको छ । यससँग जोडिएका धेरै कुराहरु नजानेर दम्पतीबीच सम्बन्ध खराब भएको हामीले देखेका छौ । यस्तै केही जिज्ञासाहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।पहिलो जिज्ञासा यसप्रकार रहेको छः
सम्पर्क गर्दा शुक्र किट पत्नीको यो–नी बाहिर स्ख लन गरिएको थियो । के अब उनी ग र्भवती हुनेछिन् ? हामी दुबै चिन्तामा छौं किनकि हामी अहिले मातापिता बन्न तयार छैनौं ।यसै विषयमा अर्को प्रश्नः